Maamulka Gobolka Banaadir oo shir deg deg ah ka yeeshay dhaca Mobeelada - Awdinle Online
Maamulka Gobolka Banaadir oo shir deg deg ah ka yeeshay dhaca Mobeelada
Guddoomiye ku Xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare) ayaa maanta shir guddoomiyey kulan ka dhacay xarunta Aqalka Dowladda Hoose oo looga hadlay dardargelinta Amniga Caasimadda.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Agaasimayaasha hoostaga qeybta Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir, la taliyaasha Amniga iyo saraakiisha Amniga Aqalka dowladda Hoose ee Xamar.
Kulanka ayaa lagu faaqiday cabashooyin ka imaanayey shacabka oo la xariira kooxo hubeysan oo xiliyada habeenkii dhac geystay, walow oo ay ka jawaabeen ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Gebagebadii, Guddoomiye Cali Yare ayaa kula dardaarmay saraakiisha amniga iyo Agaasimayaasha in ay laba jibaaraan shaqada ay hayaan bulshada, waxaana uu sheegay in la joogteyn doono kulamada noocan oo kale ah ee looga hadlayo Amniga Caasimadda.
Previous articleGuddoomiye Mursal oo Xildhibaanno u sheegay inuu fashilmay Heshiiskii 17-kii September
Next articleMidowga Musharixiinta oo sheegay in Maanta Farmaajo uu ka fashilmay qorsho muddo kordhin ah